Tag: Dzemagitare Martech Zone
Maitiro Ekukurumidza Kuvhura A Weather-Yakavakirwa Mushandirapamwe Pasina Coding Unyanzvi
China, January 21, 2021 China, January 21, 2021 Katarzyna Banasik
Mushure mekutengesa kweChishanu kweChishanu, kupenga kweKisimusi, uye kutengesa-kweKisimusi tinozviwana tiri mumwaka wekutengesa unotyisa wegore zvekare - kunotonhora, kuchena, kunaya, uye sinou. Vanhu vakagara pamba, pane kungofamba-famba vachipoterera nzvimbo dzekutengesera. Chidzidzo chegore ra2010 nenyanzvi yezvehupfumi, Kyle B. Murray, chakaratidza kuti kusvibiswa nezuva kunowedzera kuwedzera kudyiwa uye mukana wekushandisa. Saizvozvowo, kana kuine makore uye kuchitonhora, mikana yedu yekushandisa inoderera. Uyezve, mu
Symbl.ai: Iyo Yekuvandudza Platform yeKutaura Nehungwaru
Zvinhu zvakakosha zvebhizinesi ndezvekukurukurirana - zvese zviri mukati hurukuro pakati pevashandi uye mari yekunze inogadzira hurukuro nevatengi. Symbl inoteedzana suite yemaAPI ayo anoongorora zvakasikwa hurukuro dzevanhu. Inopa vanogadzira kugona kukwidziridzira kusangana uku uye kuvaka zvisingawanzoitika zvevatengi mune chero chiteshi - ingave izwi, vhidhiyo kana zvinyorwa. Chiratidzo chakavakirwa paContextual Conversation Intelligence (C2I) tekinoroji, ichigonesa vanogadzira kuti vakurumidze kusanganisa hunyanzvi hwekugadzira hunoenda